Archinstall, chishandiso chinoita kuti Arch Linux ive nyore kuisa | Kubva kuLinux
Archinstall, chishandiso chinoita kuti Arch Linux ive nyore kuisa
Arch Linux yakafungidzirwa sekuparadzirwa kweLinux kunoitirwa vashandisi vepakati nepamberi paLinux uye kuti haina kukurudzirwa kune vashandisi vatsva kana avo vanga vachifamba kubva kune imwe sisitimu yekushandisa (taura Windows kana Mac OS) uye kunyangwe muchokwadi maitiro ekumisikidza asina kuoma, chokwadi ndechekuti kana zvinotora nguva yakareba kupfuura zvakajairwa kuti kana imwe yekuisa wizard kana imwe script yakashandiswa.
Kunyangwe vazhinji vachizobvuma izvozvo Ichi chidiki chenguva chibayiro chinobhadhara mukuva nehukama hwakawanda uye yakabwinyiswa kusvika pachiyero chekushandisa kwako, kunyangwe kune avo vane shungu yekugona kuve neArch Linux vasina kana nzira yekumisikidza yekumisikidza, vanogona kusarudza chinobva.
Uye chikonzero chekubata pane ino nyaya ndechekuti munguva pfupi yapfuura iyo Arch Linux yekuparadzira vanogadzira yakafumurwa kuburikidza neshambadziro kusangana kwe "Archinstall" mugadziri mukati mekuisa ISO mifananidzo, iyo inogona kushandiswa panzvimbo pekuisa nemaoko kugovera.
Archinstall inoshanda mu console mode uye inopihwa senzira yekumisikidza kuisa yekuparadzira kunyangwe zvakare nekukanganisa, sepakutanga, iyo manyore mode inopihwa, zvinoreva kushandisa nhanho-nhanho yekumisikidza gwaro.
Iyo yekumisidzana yekubatanidza yakaziviswa muna Kubvumbi 1, asi iyi haisi dambe yaifungwa nevazhinji, sezvo archinstall yakawedzerwa ku / usr / share / archiso / configs / releng / profile), iyo nyowani modhi yakaedzwa mukuita uye chaizvo anoshanda.
Zvakare, kutaurwa kwako kwakawedzerwa kune kurodha peji uye archinstall package yakawedzerwa kune repamutemo repamwedzi miviri yapfuura. Archinstall yakanyorwa muPython uye yanga ichichinja kubva 2019. Iyo yega yega plugin ine kuiswa kweiyo graphical interface yakagadzirirwa kuiswa, asi haina kuverengerwa mumifananidzo yeArch Linux yekumisikidza izvozvi.
Iyo yekumisikidza inopa maviri modes: inotungamirwa uye otomatiki. Mune inowirirana mode, mushandisi anobvunzwa akateedzana mibvunzo inovhara yekutanga setup uye yekuisa manyore matanho.
Mune automated mode, zvinokwanisika kushandisa zvinyorwa kugadzira zvakajairwa otomatiki ekuisa matemplate, iyi modhi yakakodzera kugadzira yako wega prototypes akagadzirirwa otomatiki kuisirwa ine yakajairwa seti yekugadzirisa uye mapakeji akaiswa, semuenzaniso kukurumidza kumisikidza kweArch Linux munzvimbo dzakatarwa.
NaArchinstall, iwe unogona kugadzira chaiyo yekuisa profilesSemuenzaniso, iyo "desktop" profile kusarudza desktop (KDE, GNOME, Awesome) uye nekuisa mapakeji anodikanwa kuti iite kuti ishande, kana iyo "web server" uye "dhatabhesi" profiles kusarudza nekuisa zvemukati zvewebhu, maseva uye DBMS . Iwe unogona zvakare kushandisa ma profiles ekuiswa kwenetiweki uye otomatiki system kutumirwa kune boka remaseva
Finalmente kune avo vanofarira kuziva gwaro rekumisikidza, unogona kutarisa ruzivo rwakagadziridzwa mukati meArch Linux Wiki Mune inotevera chinongedzo.
Kana vari avo vanoshamisika kuti ndeupi mutsauko uripo pakati peiyo yekare Arch Linux kuisirwa vs kushandiswa kwe archinstall, ndinogona kutaura nechiratidzo kuti archinstall inonyanya kukusunungura kubva pakutaipa mirairo kana kunyanya kunetseka nekuziva kuti ndeipi mhando yekhibhodi dhizaini Inofanira kuiswa, mutauro, iyo nzira yezvikamu, ma disks, nezvimwe, nekuti kuve chishandiso "kune imwe nhanho michina" inokusevha nguva yakawanda.
Kunyangwe seyako kutaura, ini ndinogona kutaura kuti iko kugona kwekugona kuva neArch Linux iri kudzidza sekudaro, kubvira kumisikidzwa kwekugovera kunopa iwe kuti unzwisise zvishoma nezve nzira, mashandiro echikamu chimwe nechimwe pamwe nezvimwe mafaira ekugadzirisa.
Ipo Archinstall ichibvumidza auto kupatsanura nesarudzo yako yefaira system sarudzo, auto gadzira desktop nharaunda, gadzirisa network mapindiro, uye zvimwe zvese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Archinstall, chishandiso chinoita kuti Arch Linux ive nyore kuisa
Zvakanaka, inguva. Iwe unogona kugadzira zvachose tsika sisitimu uye uve hushamwari hushoma. Uye zvakare, iwe unogona kugara uchipa sarudzo yekuenderera nekuisa zvese neruoko. Chinhu chimwe hachibvise chimwe. Yakanaka kuArch.
MOS-P4: Kuongorora yakakura uye iri kukura Microsoft Open Source - Chikamu 4
Penpot: Vhura Sosi Prototyping uye Dhizaini Platform